कान समाएर उठबस गर्दा सजाय होइन दिमागको कसरत ! – MEDIA DARPAN
कान समाएर उठबस गर्दा सजाय होइन दिमागको कसरत !
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Apr 9, 2019
स्कुले जीवनमा सजायस्वरुप कान समाएर उठबस गर्नुपरेको अनुभव हामी धेरैको छ होला । स्कुलमा विद्यार्थीलाई दिइने सजायमध्ये यो सबैभन्दा सहज र कम पीडादायक पनि हो । यसले विद्यार्थीलाई शारीरिक रुपमा धेरै पीडा नदिएपनि मानसिक रुपमा लज्जित बनाउने र गल्ती नगर्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वास शिक्षकहरुको हुन्छ । तर, कान समाएर उठबस गराउने त्यो विधि केवल सजाय मात्र होइन रहेछ । त्यो त दिमागी स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने रहेछ ।
नायिका आलिया भट्ट अब तेलुगु चलचित्रमा पनि
विवेक ओवराय VS सलमान खान